डिशहोमद्वारा 'लक्की ड्र' मार्फत एक लाख प्राप्त गर्ने दश जना विजेताको आइडी नम्बर सार्वजनिक - लोकसंवाद
काठमाडाैँ । डिशहोमले 'DishHome मा Dealer दाईको Discount' नामक योजना अन्तर्गत २०७६ साल चैत्र ७ गते देखि २०७७ साल जेष्ठ ८ गते सम्म Fund Transfer बाट बार्षिक रिचार्ज गर्नुहुने ग्राहकहरुलाई समावेश गरेर Mega Lucky Draw सम्पन्न गरेको जनाएकाे छ ।
योजना अनुसार जेष्ठ ९ गते शुक्रबार साँझ ५ बजे डिशहोमको Showcase channel No. 100 बाट Live Lucky Draw प्रसारण गरिएको थियो । उक्त योजना अनुसार १० जना भाग्यशाली विजेताहरुले प्रति व्यक्ति रु १००,००० /– नगद प्राप्त गर्नु भएको जानकारी दिएकाे छ ।
Mega Lucky Draw बाट डिशहोमको सेटअप बक्सको CAS ID No. 71913300795 , 02519229234, 71903393800, 02558114709, 71912401511, 71907479506, 71913350964, 71908166573, 71905851581, 02519245752 लाई बिजेता घोषणा गरिएको छ । बिजेताहरुलाई प्रति व्यक्ति रु. १,००,०००/ – नगद उपहार प्रदान गरिने भएको छ । बिजेताहरुलाई डिशहोमको तर्फबाट बधाई दिइएको छ ।
आउने Live Lucky Draw २०७७ साल जेष्ठ १६ गते शुक्रबार सोहि च्यानलबाट सोहि समयमा प्रसारण गरिने जानकारी गराइएको छ । २०७७ साल जेष्ठ ९ गते शुक्रबार देखि जेष्ठ १५ गते बिहिबार सम्म Fund Transfer बाट बार्षिक रिचार्ज गर्नुहुने ग्राहकहरुलाई जेष्ठ १६ गतेको Live Lucky Draw मा समावेश गरिने छ । अधिक जानकारीको लागि देशभर रहेको डिशहोमको डिलरहरुमा सम्पर्क गर्न सकिने समेत जनाइएकाे छ ।